Ungangibuzi ukukhuluma mayelana Paris -
Ngingayithola kanjani ukudlulisela ukunambitheka
Kiss lothando Niny Richchi
Futhi Van Gogovsky obomvu kwelanga?
Ngempela, ukuze sokufunda nokuxoxa Paris - awubongwa! Hhayi-ke, indlela ukutshela amazwi mayelana nomuzi, ukunconywa Izimbongi nabalobi, zasendulo nezanamuhla, romantic and pragmatic? Ungafunda wonke izincwadi ezikhuluma ngaye, kodwa uhambo Paris kuzokusiza uqonde ukuthi lo muzi nokuwa othandweni nawe konke ukuphila kwakhe.
Ngokuzimela noma "wengamela '?
Ukuvakashela Paris unga, okokuqala kunakho konke, ukuthenga ukuvakasha ku travel ejensi. Lokhu kukhetha efanelekayo imfundamakhwela izihambi, kodwa futhi ngoba labo abamatasa kakhulu futhi awukwazi ukuhlela uhambo Paris wedwa. Kulabo usunolwazi oluhle kakade wokujikeleza akesabi ukwenza izinqumo, ukwenza self-ukuvakasha okunjalo akunzima, futhi plus lolu hambo, kuqhathaniswa iholidi iphakethe kusuka opharetha hambo, nokunye okuningi.
Ziyini izinzuzo? asho:
1. Unquma lapho, kulokho ifomu yezokuthutha uya noma ngendiza.
2. Akukho imikhawulo, ngaphandle usuku visa, ukhona ubude ukuhlala e-France.
3. bakhululekile ukukhetha ukuthi uyaphi ukuphila ehostela, ihhotela noma suka ifulethi.
4. Uma uvula Schengen multivisa ungaya izinsuku ezimbalwa, isibonelo, e-Italy noma Spain.
5. Nge self-ukubhalisa wonke amadokhumenti, amathikithi yokubhuka kanye yokuhlala izikhathi eziningana kunganciphisa izindleko zokuhamba. Ngokwesibonelo, inkampani yokulungisela abahambayo inikeza ukuchitha impelasonto romantic amabili e-Paris ngoba ama-ruble ayizigidi 77. Le mali ifaka phakathi yokuhlala ehhotela 4 izinkanyezi kanye izindiza. izindleko ezengeziwe visa, umshwalense wezokwelapha, futhi zezindiza imali nophethiloli ngeke azisizi-10 000 ruble. Ngakho, impelasonto romantic enhloko-dolobha French izobiza ruble 87 000 umuntu ngamunye. abahambi abanolwazi ziye zalinganisela ukuthi ngesikhathi visa ezimele, ngokukhetha amathikithi ushibhile (izindiza kanye noshintsho noma ekuseni) kanye esingaphansi ihhotela lezinkanyezi, ungagcina ruble 9000 kuya ku-20 000, umuntu ngamunye. Umxhwele?
Ezintweni ezinhle oyoletha uhambo ezimele eParis bazokhuluma manje ngalokho isenzo udinga ukuthatha konke ukuhamba njengoba kwakuhleliwe, futhi uhambo ushiye izinkumbulo ezinhle kuphela nemizwelo.
Nganoma yisiphi isikhathi, inhloko-dolobha French uzokwazi kukumangaze, charm futhi ukuthandana. Nokho, uma uhambo Paris ihlelwe wena ufuna ukulondoloza izimpawu imali, kungcono hit umgwaqo ngemuva onyakeni omusha, futhi kuze kube maphakathi no-March noma ekupheleni September futhi ngesikhathi ngaphambi Christmas. Ngalesi sikhathi enhloko-dolobha isizini French "ongaphakeme", okusho ukwehla kwamanani for izindiza kanye amakamelo ehhotela.
Ngaphambi oda amathikithi futhi incwadi ehhotela, kudingeka uthole ukuthi yini amaphepha olusemthethweni udinga ukuqoqa ukuthola i-visa ukuhlola ubuqiniso passport yakho. Ukuze uthole imininingwane ngalokho kudingeka amadokhumenti, kuphi futhi kanjani isicelo visa isiFulentshi, sicela uvakashele Embassy. izidingo Amaphepha ziyefana e Schengen visa kunoma yiliphi izwe: izindiza noma ukubhuka, ipasipoti esebenzayo ngemajini sokusebenza izinyanga 3 kanye Amakhasi saziso ezintathu nalutho, imibhalo efakazela namandla ezezimali (isitifiketi omsebenzi noma ebhange izitatimende) . Ngempela zidinga umshwalense wezokwelapha kanye isiqinisekiso ehhotela yokubhuka. Manje izinto zokuqala kuqala.
Ngaphambi kokuqhubeka kulesi sigaba, akunandaba, okuhleliwe lohambo ngempelasonto eParis noma inyanga yonke, ukunquma ukuthi iyiphi indawo nje kwedolobha elikhulu ufuna siphile. Amanani yokuhlala enhloko-dolobha French zihluke kakhulu: kusuka 15 euro embhedeni ehostela endaweni suburban ukuba inani elikhulu e amahhotela ephezulu.
Uma uhlela eziningi ukuhamba, futhi ukuvakashela emadolobheni asemaphethelweni eParis, kubalulekile ukuba uzicabangele izinto ongakhetha lwamahhotela etholakala eduze East noma Gare de Lyon. Ngokwesibonelo, Ihhotela Helvetia noma Hôtel de l'Aveyron, etholakala eduze Gare de Lyon, izobiza cishe 80 euro ubusuku ngabunye.
Naphezu intengo iphansana, akudingekile agcinele amahhotela, owawuseduze wesifunda kuhle lobugebengu Paris Gare du Nord, eduze North kanye West iziteshi.
Kuleso simo, uma uhambo ahlelile bonyana Disneyland Paris, bese ukugxila kangcono kwi amahhotela eduze nale omkhulu ipaki. Izindleko amakamelo kulezi amahhotela elise ngaphakathi ukuhamba ibanga, iqala kusukela 100-110 euro.
Lapho futhi senziwa kanjani umshuwalense onjalo?
Uhlu kwemibhalo edingekayo ukuze sithole ama-visa eFrance, qiniseka ucacise umshwalense yezokwelapha travel kwezilwandle. inqubomgomo enjalo kulula kakhulu ukuthenga, kanye French Embassy has a uhlu izinkampani zomshuwalense nge kwesikhathi sogunyazo ezimela.
Uma kuhlelwe uhambo eParis ezimbili, ungakwazi uyithenga noma ngesikhathi opharetha umshwalense elidayisa, noma usebenzise izinsiza-Web eyaziwa noma eziqinisekiswe i-French Ihhovisi kanye izinkampani zomshuwalense ukukhipha inqubomgomo inthanethi.
Inqubomgomo okuholela kuyadingeka ngaso sonke isikhathi kube ophethe. Ngaphezu kwalokho, ngaphambi uhambo bangahlola futhi agcinwe imeyili yabo lemilayezo engenayo, ukuze uma i-force majeure ukuthola ukufinyelela kuyo ngaphandle kwezinkinga.
Kanjani ukuze uthole Paris?
Namuhla, baliyisa enhloko-dolobha French iyatholakala ngebhasi noma ngesitimela, okuyinto isikhathi eside futhi oyisicefe noma ndizela Paris ngendiza. Kungakhathaliseki ukuthi indlela yokuthutha ikhethwa, kuba esigabeni ezibizayo iningi uhambo oluzayo. Sekuyisikhathi eside iningi izivakashi ukuhamba eParis iqala imali.
Ungagxili emaphuzwini ayinkimbinkimbi kanjani ukuthenga bhasi WaseYurophu nge ukuvakashelwa eFrance futhi uthole Paris ngesitimela. Plane Nokho ezibizayo, kodwa ngokushesha okungaka. Kusengaphambili, khetha usuku ukuhamba futhi ukubhuka ithikithi kwenye izindiza njalo. izindiza okuqondile futhi ongaphakeme (nomunye ushintsho) eParis lapho kusukela emadolobheni amaningi isiRashiya, ikakhulukazi eMoscow Petersburg Rostov-on-Don, Tyumen, nabanye abaningi.
Ukugcina imali kancane kuyiwe nezinye ukuzijabulisa kumnandi ukuba sihlelwe yinhlangano uhambo ezimele eParis, kungcono uthenge ithikithi uhambe lapho futhi emuva. Izindleko sokugcina yokuhamba zizoba ngaphansi.
Lapho sifuna futhi ukubhuka amathikithi kufanele uyinake ekufikeni sezindiza. Kubalulekile ukuthi wayengumuntu edolobheni njengoba zokuhamba zomphakathi eParis akuyona ezishibhile. Kakhulu eseduze sezindiza yomfowabo kaCharles de Gaulle.
uhambo Independent eParis, cishe, ngeke ngaphandle ukunyakaza izungeze lo muzi. Yiqiniso, ungakwazi ukuqasha imoto noma ukuthatha itekisi, kodwa yena nezinye izinketho abasakwazi eqolo. Futhi, ngaphezu, nekambiso yeenthuthi yomphakathi woke enhlokodolobha yase France is kahle asethuthukile. Ukuze amabhasi, trams kaMasipala zinikezwa uhlobo olufanayo amathikithi, okuyinto zihlukaniswe kuphela ngenani ukusebenza. Thenga kubo kungaba ehhovisi, futhi umshayeli. Inketho yokugcina kungadla kancane ezibizayo.
Ngokombono baseParis, elula kunazo ezokuthutha wedolobha - iyona ehamba emgodini, okuyinto uxhumeke kwinethiwekhi ye izitimela Rer. Ngo Isikimu komhlaba bona zibonakala izinhlamvu ezingu-A ngokusebenzisa E.
Enye wemodi elula zokuthutha kukhona amabhasi. In Paris, ngaphandle imizila evamile ezisemadolobheni, kukhona uhambo olukhethekile ukudlula ukuthi ngokusebenzisa ingxenye zomlando zomuzi, esehlanganise eziningi ezikhangayo.
Uma uhleleni uhambo isabelomali eParis, yokugibela kulezi amabhasi izivakashi bayowuthokozela - uneminyaka omunye eshibhe! Ungagcina ku amathikithi ngamunye: isibonelo, omunye ithikithi lohambo kubiza € 1.70, kodwa isethi 10 izobiza nje € 13,70.
Tram enhloko-dolobha French is hhayi kakhulu athuthukile - imizila emine kuphela. Futhi kuphela ugijimela inombolo tram 3 uzungeze umuzi, bonke abanye ukukhonza emizaneni.
Kuphi futhi yini ukubona?
Ngoba lowo cishe konke ukuphila kwakhe waphupha uhambo Paris, lo mbuzo akuyona: i-Champs Elysees kanye Arc de Triomphe, Notre Dame Cathedral kanye Eiffel Tower, le Louvre futhi Versailles, Fontainebleau futhi Montmartre. Wonke umuntu uhlu ezikhangayo!
Uma ufuna ukubona yonke into ngesikhathi esisodwa, futhi kunzima ukunquma ngokuthe ngqo oda, ungasebenzisa imisebenzi travel ejensi ahlukahlukene kanye nabaqondisi okhuluma isiRashiya.
Izingane Disneyland Paris
Ukuze labo abahamba nezingane, uhambo Disneyland Paris kuzovumela ukunikeza izingane indaba, kanye nabantu abadala kwabanye isikhathi uzizwe sengathi izingane. Ngaphambi kokuya lapho, qiniseka ukuhlola ezikhangayo nezindawo zazo, futhi qiniseka ukuthenga izinsuku amathikithi okungenani ezinhlanu inthanethi. Ukucabangisisa ngalezi zinto kusengaphambili kuyosiza wonge-30 euro umuntu ngamunye.
Ngokuvamile, intengo amathikithi epaki yokuzijabulisa ihlukile, futhi kungamenza alahlekelwe kusuka 55 € kuya ku-145 €. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi isikhathi sokusebenza ezingu-6 kuya onyakeni.
Uma ufuna eminye ukunciphisa izindleko uhambo Disneyland Paris, kungcono ukuhlela yona ekupheleni kuka-September - maphakathi no-December, kanye kusengaphambili ukubhuka ehhotela eduze kwalesi sikhungo ukuzijabulisa. Kuleso simo, uma uhlala phakathi nendawo, kufanele uchithe isikhathi nemali endleleni, njengoba Disneyland e Emaphethelweni elincane Paris - Marne-la-Vallee, elise 35 ukusuka enhlokodolobha.
Ngakho, uma ungumnikazi ukuya Disneyland Paris, kuzodingeka uchithe 250-300 € ukuhamba, 75-100 € - ubusuku ihhotela, 55 € - kwi ithikithi eshibhe kwepaki. Umphumela libukeka 400-450 € ngaphandle visa umshwalense. Intengo kungenzeka kancane anda, kodwa kuphela ngenxa indawo ehhotela njengoba yokugibela ukuhlala kude Disneyland kuyodingeka bakhokhe. Tour opharetha ukunikela ukukhokhela iholide kusuka € 700 ngaphandle izindleko visa, umshuwalense wezempilo, kanye ezihlukahlukene imisebenzi eyengeziwe.
Kuwufanele zivakashela iParis okungenani kanye ezimpilweni zabo ukuzizwa emkhathini romantic ka emigwaqweni yayo emincane, ubuhle Seine kanye nomkhakha amabhuloho zayo, ukuqonda yonke abalobi, abaculi kanye izimbongi okudumisa leli dolobha elihle. Futhi malini ukukhokhela konke - kuphuma kuwe!
Kuhle guest house, Tsandripsh: izilinganiso nokubuyekezwa
Popcorn - ikhalori, inzuzo kanye nokulimala
Cross-doking- yini lokhu? Cross-docking agcine, amasevisi wesifunda